Xuska labaatanaad ee gooni-isu-taagga Somaliland oo maanta la xusay. – Radio Daljir
Hargeysa, May 18 – Xus guurada 20-aad ee ka soo wareegtay markii ay Somaliland ku dhawaaqday goonni u istaaga ayaa maanta si ballaadhan looga xusayaa magaalooyinka Somaliland.
Xafladaha munaasabaddan ee degaannada Somaliland oo tii ugu waynayd ay ka dhacday Beerta Xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa ay ka qayb galeen kumannaan shacab ah, fannaaniin, shaqaalaha wasaaradaha, arday, siyaasiyiin, iyo ciidamo gaaddo ka ciyaar halkaas ku soo bandhigay.
Somaliland ayaa farriinta ugu way nee ay munaasabaddan ka dirtay ay ku socotay beesha caalamka, lagagana dalbaday in ay Somaliland siiyaan ictiraafka ay ku raad-joogtay 20-ka sannadood.
Ammaanka magaalooyinka waawayn ayaa si aad ah loo adkeeyey, waxana wali xidhan isku socodkii gaadiidka, taas oo la joojiyay maalintii shalay (Salaasa).
Goobjoogayaal ku sugan magaalada Hargeysa ayaa Daljir u sheegey in nooca dabbaal-daggan oo kale aan Somaliland hore looga samayn.
Xuskan ayaa ku soo beegmaya xilli xalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda darajada koobaad ee gobolkaas ee Somaliland, xilli ay magaaladaas madax ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo wusurada ee Somaliland ay u joogeen qabanqaabada xuska maanta ee 18-ka May.
Marka la barbar-dhigo gobollada kale ee Somaliya, Somaliland waxay horumar wanaagsan ka samaysay dhinacyada dimoqraadiyadda iyo ammaanka.